Vidio Google gosipụtara na Android Nougat bụ nsụgharị 7.0 | Gam akporosis
Google bu otu n’ime ọ ma ka esi egwu kaadị ya mgbe a bịara n'ịtụle atụmanya gbasara ụdị ọhụụ gam akporo gị. Ikekwe ọ gaghị eru elu nke ndị nrụpụta ndị ọzọ na-ere omume ọma na uru nke njedebe ha na ụwa niile site na nkwupụta ndị a na akụkọ ndị a, mana mgbe oge ruru iji bulie atụmanya banyere aha ọdịnihu nke gam akporo N, ọ nwere ike ịmepụta ebe nrụọrụ weebụ ịjụ maka nkwenye na aha nke mbipute a nke gam akporo.
Nyaahụ anyị bipụtara nke ahụ Android N bu gam akporo Nougat, ma anyị nwere obi abụọ banyere ụdị nke ọnụ ọgụgụ nke mmelite ahụ nwere njikọ chiri anya na ihe nougat. N'ikpeazụ, na vidiyo nke edere na ọwa gam akporo na YouTube anyị amatalarị na ọ bụ gam akporo 7.0, yabụ anyị nwere ike ichere maka ngwaọrụ Nexus abụọ ahụ, site na nke taa anyị nwere ụfụ na-adọrọ mmasị, dị maka ịzụta ya na gam akporo 7.0 Nougat.
Android 7.0 na-eso gam akporo 6.0.1, nke nwere ike ịpụta na Android N enwebeghị ntọhapụ nke ya. Anyị ejirila Android 5.0 nọrọ na 5.1, 4.0 iji gaa 4.1, ma rutekwa 4.4. Anyị nwere ike ịga n'ihu na ọnụọgụ mbipute ahụ mana ndị ahụ .1 nwere ihe ndị ọzọ gbasara idozi ahụhụ na-abịa na njedebe ikpeazụ karịa ihe ọ bụla ọzọ.
A katọrọ ihe oyiyi ọhụrụ a nke Google wuru maka enweghị imewe iji tinye atọ nougat na ụkwụ gị. Anyị agaghị atụfu echiche ịgba izu banyere ihe ọ pụtara inwe mpempe akwụkwọ atọ, ebe ọ bụrụ na e nwere abụọ ọ nwere ike ịpụta ihe ọzọ, yabụ anyị hapụrụ ya dịka ọ dị n'eleghị ihe ọ bụla karịa nwa bebi gam akporo ahụ na-enye anyị ọtụtụ ọysụ na n'oge na-adịghị anya Anyị ga-enwe na ọnụ anyị, ma ọ bụrụ na onye na-emepụta ama ama chọrọ ya, dị ka mbipute 7.0 nke gam akporo.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Nkuzi » Gam akporo nsụgharị » Google kwadoro na Nougat bụ Android 7.0 na vidiyo bipụtara